Ukuvalwa kweBlogging kuGuy Kawasaki | Martech Zone
Ukuvalwa kweBlogging evela kuGuy Kawasaki
NgoMvulo, Aprili 30, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Isicatshulwa: Ibhlogger eyaziwayo, intengiso kunye nongxowankulu bamashishini Guy Kawasaki, unika iingcebiso malunga nendlela yokubhala ibhlog enkulu kwaye axoxe ngendlela abekwe ngayo kwinqanaba le-blogger inombolo 24 kuyo Itekhnoloji. Ethetha esuka ekhayeni lakhe eCarlifonia, udibana noJennifer Jones kunye neeVoice zokuThengisa kwaye uchitha ukuba uchitha iiyure ezingama-2-3 ngosuku kubhloga. Ukwanelisa neemviko URobert Scoble (ngoku ubekwe ngaphezulu kweScoble kwiTechnorati). Nangona engazifundanga naziphi na iiblogi, uthi usebenzisa eyakhe uShishino bondle ngokwenkolo ukubamba iflogi ekhethekileyo yeblogger.
Meyi 1, 2007 kwi-6: 08 PM
lo mfo uhlala enomdla kakhulu ukumamela. Enkosi nge-vid!
UDavid Airey :: Uyilo loyilo ::
Meyi 3, 2007 kwi-9: 01 AM
Enkosi ngokuthumela le nto. Ndikonwabele ukumamela.
Meyi 3, 2007 kwi-11: 56 AM
Wamkelekile, David & Yonke imihla! Ndikuthanda kakhulu ukumamela intetho kaGuy Kawasaki. Unamandla, uyahlekisa kwaye ubonakala ngathi ungumntu omkhulu ojikeleze umfana. Ngokuqinisekileyo imeko yakhe entle ikhokelele kwimpumelelo yakhe emnandi!
Meyi 4, 2007 kwi-9: 11 AM
Ndiyifunde of kuye kwibhlog kaDarren, kodwa eli lixesha lokuqala endakha ndafumana uGuy. Ndichukumisekile kukubonakala kwakhe kunye nokuqonda. Ndimbeka kuluhlu lwam lwabantu azotya nabo.
Enkosi ngokuthumela le nto.